MAVHIVHA fekitari, Vatengesi - China MAVHALI Vagadziri
ZHD Series (Magetsi kana Pneumatic) Minimum Kuyerera Kudzora Valve
Nhoroondo ZHD multistage keji yekudzora vharafu yakashandiswa multilevel keji symmetric sleeve contol vharafu. Iyo inozadza kudzora kwepakati velocitywithin vharafu, uye yakaderedzwa zvakanyanya ruzha inogadzirwa neyakaomeswa gasi kana chiutsi mukati mevhavha, yakadzikama multistage kumanikidza kudzikisa kudzikisira inoshanda kudzivirira kudzivirirwa kwemvura, saka ndiyo yakagadzikana yekudzora vharuvhu inoshandiswa mukumanikidza-kwepakati svikiro kuita, vatengi vanogona zvakare kusarudza akawanda -spring disphragm mashini kana pneumatic actuators, nezvimwewo T ...
ZDM Series otomatiki kudzora kudzora vharafu
Nhoroondo ZDM dzakateerana otomatiki kudzora vharuvhu ipombi yekudzivirira mudziyo. Iyo otomatiki inodzivirira centrifugal pombi kana pombi muviri ikaitika yecavitation yekukuvara isina kugadzikana (kunyanya kuendesa mvura inopisa pane yakaderera mutoro oparesheni). Kamwe pombi kuyerera kwadzikira pane kuyerera kwayakatarwa, kudarika kunogona kuvhurika zvakakwana kuverengera hushoma hunodiwa kuyerera pombi. Kunyangwe kumhanya kwakanyatsovharwa, kureva kumhanya kuyerera zero, iko kuyerera kushoma kunogona kupfuura nekupfuura kweAutomatic recirculation. Kumanikidza r ...
ZDL Series otomatiki kudzora kudzora vharafu
Nhoroondo ZDL dzakateedzana Auromatic kudzora vharafu imhando yepombi prtectiong mudziyo. Iyo otomatiki inodzivirira centrifugal pombi kana pombi yemuviri ikaitika kukuvara kwecavitation kana kusagadzikana (kunyanya kuendesa mvura inopisa pane yakaderera mutoro oparesheni). Kamwe pombi kuyerera kwadzikira pane kuyerera kwayakatarwa, kudarika kunogona kuvhurika zvakakwana kuverengera hushoma hunodiwa kuyerera pombi. Kunyangwe kumhanya kwakanyatsovharwa, kureva kumhanya kuyerera zero, iko kuyerera kushoma kunogona kupfuura nekupfuura kweAutomatic recirculation. Dzvinyiriro ...
ZDT Model otomatiki kudzora kudzora vharuvhu
Nhoroondo ZDT akateedzana Automstic kudzora vharuvhu ipombi yekuchengetedza mudziyo. Iyo otomatiki inodzivirira centrifugal pombi kana pombi muviri ikaitika kukuvara kwecavitation kana kusagadzikana (kunyanya kuendesa mvura inopisa pane yakaderera mutoro oparesheni). Kamwe pombi kuyerera kwadzikira pane kuyerera kwayakatarwa, kudarika kunogona kuvhurika zvakakwana kuverengera hushoma hunodiwa kuyerera pombi. Kunyangwe kumhanya kwakanyatsovharwa, iko kuyerera kukuru kuri zero, iko kuyerera kushoma kunogona zvakare kubuda kubva pakupfuura. ZDT yakateedzana ine hukuru hukuru, ...
Bhaudhi Bonnet Gate Valve
Zvigadzirwa dhizaini maficha 1. Ose magadzirirwo uye kugadzira kunoitwa zvakanyatsotevera GB / T 12234, API600 uye API602. Izvo zvigadzirwa zvine chimiro chine musoro, chisimbiso chakavimbika, mashandiro akanaka uye yakanaka modelling. 2. Co hard alloy welded chisimbiso chepamusoro, icho chiri kupfeka chinodzivirira, chiratidzo chekukurwa kwevhu, humbowo hweabrasion uye hwakareba-hupenyu. 3. Iyo yepamusoro uye inogadziridza midhiya yevhavhavha shaft yakaiswa senitrogenized kuitira kuti igadzirise uye abrasion isabatike. 4. PN≥15.0MPa (Kirasi 900), ...
Kuburikidza neRukoti Gedhi Valve
Iyo kuburikidza nemugero wegedhi vharafu ine zvigaro zviviri zvinoyangarara kuti ipe chisimbiso chakasimba negedhi. Yakazara kubereka kuburikidza nekodhi dhizaini kunogona kubvisa kuyerera kusagadzikana. Kumanikidza kudonha hakuna kukura kupfuura kuburikidza nehurefu hwakaenzana hwepombi.
Unyanzvi Parametaita rezita Dhayamita: 3/4 "~ 6" Zita rekumanikidza: ANSI 150LB-4500LB Muviri mhando yakatwasuka-kuburikidza nenzira mhando, angle mhando mashandiro tembiricha 150 ℃ -450, kuyerera maitiro akaenzana muzana, mutsara Lineuator magetsi kana pneumatic actuator Leakage inosangana ne ANSI B16. 104 V leakage (VI mwero chisimbiso inowanikwa) Valve Hunhu 1) Circulatory convection dzidziso, yakawanda-nhanho kumanikidza kudzikisira chimiro. 2) Simba rinoshanda, ens ...
Ndokugadzira Steel Trunnion vakatasva Zvizere Welded Ball Valve
Detail Dhizaini Dhizaini: API 6D Dhizaini Kugadziridza: Kuzadza kwakazara pakati pemuviri uye bhoneti, Chiteshi chakazara kana kudzikisira chiteshi, Moto wakachengeteka dhizaini, Double block & kubuda ropa, Mhango yekumanikidza kuyananiswa, Anti-blowout stem & Anti-static zvishandiso, Inesarudzo mbiri pisitoni dhizaini, Inesarudzo yepasi pevhu yakatambanudzwa dhizaini saizi Range: 2 ″ ~ 48 ″ Pressure Rating: ANSI 150lb ~ 2500lb Muviri Wenyaya: Yakagadzirwa Carbon Simbi Trim Chinyorwa: A105 + ENP, 13Cr, F304, F316 Kushanda: Lever, Gear, mota, Pneumatic,
Side Kupinda ndokugadzira Steel Trunnion vakatasva Ball Valve
Detail Dhizaini Dhizaini: API6D Dhizaini Kugadziridza: Chiteshi chakazara kana kudzikisira chiteshi, Moto wakachengetedzwa wakasimbiswa, Double block & kubuda ropa, Emergency sealant jekiseni, Mhango kumanikidza kuzviremekedza, Blowout-proof stem, Anti-static, Inesarudzo mbiri pisitoni dhizaini Range: 2 ″ ~ 48 ″ Pressure Rating: ANSI 150lb ~ 2500lb Muviri Chinyorwa: Yakagadzirwa Carbon Simbi, Stainless Simbi Trim Chinyorwa: A105 + ENP, 13Cr, F304, F316 Kushanda: Lever, Gear, mota, Pneumatic
Yakareba-pombi pombi gasi kana chiteshi chemafuta; Pressure inodzora chiteshi; kunyatsogadzirisa kumanikidza uye kuyerera kwehuwandu pachishandiswa chinobatika Chinoshandiswa Pakati Pakati: Gasi rechisikigo, oiri isina kuchena uye yakanatswa, imwe gasi risingakanganise uye gasi remvura Yekuputika-chiratidzo uye Kudzivirirwa: ExdIIBT4, IP65